Nsogbu ndagwurugwu na-eyi egwu ibibi Costa Rica, Nicaragua na Honduras | Network Meteorology
Oge ajọ ifufe ahụ agwụbeghị. Ruo 15 Nọvemba, a ka nwere ihe egwu dị egwu nke ajọ ifufe nwere ike ime. Ugbu a, oke ndaghari nke ime obodo na-achọ ibibi Costa Rica, Honduras na Nicaragua, mba ndị megharịrịrị ọrụ njikere uhie n'ihi oke mmiri ozuzo.
Usoro a, nke e hibere ụnyaahụ Wenezdee, emebilarị ndụ mmadụ ma gbuo ya.
1 Mmebi sitere na ịda mbà nke ebe okpomọkụ
2 Ọnọdụ nke ịda mbà nke ebe okpomọkụ
Mmebi sitere na ịda mbà nke ebe okpomọkụ
Nsogbu ndagwurugwu bụ ihe na - ebute oke mbibi. Na Managua, ụnyaahụ ha kpọpụrụ ihe dị ka narị ụmụ amaala asatọ ndị bi na Misquitos Cays n'ihi oke egwu nke mmiri ozuzo na oke ifufe, nke na-eyi obodo ndị dị na Caribbean na agwaetiti egwu. N'ezie, Na Tuesday, mmiri zoro wee mee ka otu onye nwụrụ na Nicaragua: nwoke dị afọ 29 na-anya gwongworo, nke osimiri dị na ngalaba ọwụwa anyanwụ nke Chontales buuru ya.
Ndị ọrụ ahụike atọ kwụsịrị na Wednesde. Ha na-eme njem na gwongworo, nke dabara na mmiri mgbe ha na-agafe akwa mmiri n'obodo Juigalpa, na Chontales.
N'oge ahụ, enweghi mmebi ọ bụla, mana Emergencylọ Ọrụ Mberede Mba (CNE) nke Costa Rica kwupụtara mkpọtụ na-acha ọbara ọbara na Wednesday na ọtụtụ n'ime ókèala ahụ, gụnyere ụsọ oké osimiri Pacific na etiti mba ahụ. Ọ bụ ezie na ịda mbà n'obi agaghị emetụta mpaghara ahụ kpọmkwem, ọ na-eme nwere ike ime ka mmụba na oke mmiri na Pacific n'ụsọ, na mgbakwunye na ime ka mmiri ozuzo na-akawanye njọ.
Honduras, dika Costa Rica, enweghi mmebi ọ bụla, mana ọ na-amụ anya. Na Thursday, a na-atụ anya ịbịaru ụsọ oké osimiri Nicaraguan wee gafee ebe ọwụwa anyanwụ Honduras, ịlaghachi na Caribbean n'akụkụ ya nke ọdịda anyanwụ na Friday.
Na Honduras ga-eweta igwe ojii na mmiri ozuzo, ọ kachasị n’ebe ugwu obodo ahụ. A na-atụ anya na ha ga-abawanye na Fraịde.
Ọnọdụ nke ịda mbà nke ebe okpomọkụ
Nsogbu Tropical a na-atụ anya ka ọ gafere site na Nicaragua na Honduras, na Fraịde echi ọ nwere ike iru Caribbean n'ụsọ oké osimiri Mexico. Site n'ebe ahụ, ọ ga-aga n'ihu na-aga n'ebe ugwu, na-eru na nsọtụ ndịda ọwụwa anyanwụ nke steeti Mississipi, ndịda Alabama na n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ Florida dị ka ajọ ifufe.
Anyị ga-aga n'ihu na-akọ akụkọ ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe ikuku » Obi ịda mba na-eyi egwu ibibi Costa Rica, Nicaragua na Honduras
"Obodo nyocha" nke ga-eme obodo a tụrụ anya maka Mars